Archives yeFebruary 2021
RedmiBook Pro 14, Pro 15, yakatangwa pamwe neRedmi AirDots 3 TWS earbuds
Redmi, pamwe neRedmi K40 dzakateedzana dzakaratidzawo iyo RedmiBook Pro 14, RedmiBook Pro 15 uye RedmiDots 3 TWS nzeve. Redmi, neChina, haana kungovhura iyo Redmi K40 nhepfenyuro asi akatangisawo RedmiBook Pro 14, RedmiBook Pro 15, uye maRedmi AirDots 3 TWS earbuds. Iwo mahedhiyo akagadzirwa kuendesa kusvika kumaawa manomwe emimhanzi kuridza pane imwechete kuchaja. Laptops… [Verenga zvakawanda ...] nezve RedmiBook Pro 14, Pro 15, yakatangwa pamwe neRedmi AirDots 3 TWS earbuds
Dhawunirodha PS Vita Emulator YePC
PS Vita ndiyo yechisere-chizvarwa console yakaburitswa mushure mejuggernaut kubudirira kwePlayStation Portable (PSP). Yakatangira yaive dutu iro rakapa Nintendo dikita kekutanga muchikamu cheruoko. Pamberi pehunyanzvi, yakapfuura nekumashure kuenderana. Mimwe mitambo kubva kuPS2 yakaendeswa kuPS Vita, kusanganisira Final Fantasy X/ X2 Remaster uye Persona 4… [Verenga zvakawanda ...] nezve Download PS Vita Emulator YePC
Sony Inozivisa Nyowani VR Headset yePS5
Mushure mekubudirira kuvhurwa kwePS5, Sony yave kushanda pane inotevera-chizvarwa VR headset yePS5. Sony inoti iyo nyowani yeVR mahedhifoni ichapa yakavandudzwa ndima yekuona, kugadzirisa zvirinani, uye ichavimba netambo imwe chete ichiita kuti kushandiswa kwayo kusanetsa. Zvinosuruvarisa, iyo yambotaurwa yeVR headset haizotangwa gore rino. Zvakakosha kucherechedza kuti chizvarwa chekutanga VR… [Verenga zvakawanda ...] nezve Sony Inozivisa Nyowani VR Headset yePS5
Acer Aspire 7 yemitambo yekutamba yakatangwa muIndia
Acer Aspire 7 inoshandiswa ne AMD Ryzen 5 5500U mobile processor. Acer yakazivisa kuvhurwa kwayo kweazvino mitambo yekutamba muIndia. Yakabatwa saAcer Aspire 7, iyo yekutamba laptop inouya nemutengo wekutanga weRs 54,990 uye inowanikwa kutengwa kubva kune webhusaiti yekambani uye Flipkart. Acer Aspire 7 8GB RAM musiyano uri mutengo paRs 54,990, nepo iyo 16GB vhezheni ichiwanikwa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Acer Aspire 7 yemitambo yekutamba yakatangwa muIndia
FAU-G multiplayer modhi iri kuuya munguva pfupi
nCore Mitambo yakazivisa kuti iyo nzira yevazhinji muFAU-G iri kuuya nekukurumidza. Iko hakuna zuva rakasimbiswa rekuburitsa kubvira ikozvino. FAUG, iyo 'Yakagadzirwa muIndia' mutambo uyo wakaita kutanga kwayo mwedzi wapfuura, munguva pfupi iri kutevera ichaburitsa nzira itsva yevazhinji kuti vatambi vafarire. nCore Mitambo haina kuburitsa chero zuva asi yakasimbisa kuti iyo modhi ichatumidzwa Team Kufa uye ichave 5 vs 5… [Verenga zvakawanda ...] nezve FAU-G multiplayer mode iri kuuya munguva pfupi
PlayStation Network kubuda kunorova mitambo uye zvemagariro: Izvo zvatinoziva
Kwangosara zuva mushure mekunge Microsoft yagadzirisa nyaya yayo yeXbox kubuda, Sony iri kusangana nezvinhu zvakafanana nePlayStation Network (PSN) yayo. Kudzima kwekambani ikozvino, kwave kuitika kwemaawa akati wandei apfuura, kunokanganisa mutambo uye zvemagariro maficha mumhuri yese yechigadzirwa chePlayStation, kusanganisira iyo PS4 nePS5, pamwe nemidziyo yechikuru sePS3 nePS Vita. Sony zve… [Verenga zvakawanda ...] nezve PlayStation Network kubuda kunorova mitambo uye zvemagariro: Izvo zvatinoziva
Huawei Mate X2 vs Galaxy Z Fold2: Musoro-kumusoro-kuenzanisa
Iwe ungadai wakasvika pakuziva pari zvino kuti foldable mafoni anouya kwekutanga. Iwo humbozha husina kuitirwa munhu wese. Izvo zvakati, musika wemafoni akapetwa wakamira zvakaomarara neHuawei kuunza yavo yechitatu-chizvarwa ruoko mune iyo Mate X2 iyo inoburitsa imwe, yakapfava fomu chinhu kupfuura iyo yakatangira. Ichi chishandiso chitsva chinoparura kukwikwidzana kunodhura ne… [Verenga zvakawanda ...] nezveHuawei Mate X2 vs Galaxy Z Fold2: Musoro-kumusoro-kuenzanisa
Heano mashandiro anoita PS5 yekuchengetedza
Munguva pfupi yapfuura, kwave kune mamwe makuhwa anga achigadzira kutenderera kunoti Sony inogona kuvhura PlayStation 5's M.2 yekuwedzera slot kuburikidza neye firmware yekudzokorora imwe nguva ino mwaka wezhizha. Iyo ingangove inhau dzinozorodza kune chero chaiye kana angave ari PlayStation 5 varidzi kunze uko, nekuti kana paine chinhu chimwe chinodikanwa neconsole, chiri chekuchengetedza. Mushure mekusiya koni ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Heano mashandiro ekuchengetedza kwePS5 achashanda
BLUETTI EP500: Giant 5100 watt awa bhatiri rezuva rinokutendera kuti uteme tambo kune gridhi yemagetsi.
Semapiyona ane hunyanzvi muindasitiri yesimba rinodzokororwa, BLUETTI yakamisa zita rayo munyika yemagetsi isiri-grid ine inocheka, yakavimbika chiteshi chemagetsi chigadzirwa mitsetse. Pamusoro pezviteshi zvemagetsi zvepakati nediki zvinotakurika, zvakatsaurirwawo kutsvagisa nekusimudzira epamusoro-simba, hombe-inokwana solar bhatiri rekuchengetedza zvigadzirwa. Mu… [Verenga zvakawanda ...] nezve BLUETTI EP500: Giant 5100 watt awa bhatiri rezuva rinokutendera kuti uteme tambo kune gridhi yemagetsi.
HP Pavilion 13, Pavilion 14, Pavilion 15 malaptop akatangwa muIndia
HP Pavilion malaptop anopa sarudzo yechipiri-chiteshi ndangariro tekinoroji uye inosarudzika Intel Optane Memory ine PCIe SSD standard kusvika 1TB. HP yakazivisa kuvhurwa kwePavilion 13 nyowani, Pavilion 14 uye Pavilion 15 akateedzana malaptop pamutengo wekutanga weRs 62,999 muIndia. Iyo kambani inoti iyi ndiyo yekutanga bhuku revatengi rebhuku rinoshandisa post-mutengi-zvishandiswezve… [Verenga zvakawanda ...] nezve HP Pavilion 13, Pavilion 14, Pavilion 15 malaptop akatangwa muIndia
Oppo Reno 5K yakaziviswa neSpapdragon 750G, yekumusoro quad-kamera setup
Oppo Reno 5K inoratidzira 6.43-inch Yakazara HD + OLED kuratidza ine 2400 × 1080 pixels resolution, 180Hz yekubata sampling rate, 90Hz zororo rate, iyo 20: 9 factor ratio, uye 91.7 muzana ye screen-to-body ratio. Oppo akazivisa Oppo Reno 5K smartphones muChina. Foni inouya nekamberi yekamera-kamera setup, 32-megapixel selfie kamera, Android 11, in-inoratidza zvigunwe zvemunwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Oppo Reno 5K yakaziviswa ne Snapdragon 750G, kumashure kwe quad-kamera setup